काप्तान पारस खड्काको बिहे,……..कहिले ??? « Mazzako Online
काप्तान पारस खड्काको बिहे,……..कहिले ???
मज्जाको अनलाईन समाचार, फागुन ११, २०७१, सोमबार, काठमाण्डौं ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का फागुन १४ गते अर्थात विहिबार बैवाहिक बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । कप्तान पारस उनी प्रेमिका प्राप्ति राज्यलक्ष्मी राणासँग लगनगाँठो कस्न लागेका हुन् । निकै लामो समयसम्म चलेको प्रेम प्रसंगपछि दुई बर्ष अघि पारस र प्राप्तीको इन्गेजमेन्ट भएको थियो ।
मोहनकुमार खड्का र रीता खड्काका छोरा पारसको बिहे स्वं. दीपकबिक्रम राणा र गौरी राज्यलक्ष्मी राणाकी छोरी प्राप्ती राज्यलक्ष्मी राणासँग हुन लागेको हो । काठमाण्डौं बासिन्दा पारस र प्राप्ती दुबैको उमेर २७ बर्ष हो ।
कप्तान पारस खड्काले आफ्नो कप्तानीमा नेपाली क्रिकेटलाई डिभिजन वानमा पु¥याएका छन् । उनको कप्तानीमा नेपाल आइसिसी टी–२० विश्वकपमा समेत सहभागीता जनाएको थियो । पारसले नेपाललाई आईसिसी डिभिजन २ मा टिकाईराखेका छन् ।
वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन लागेका कप्तान खड्कालाई मज्जाको अनलाईन परिवारको तर्फबाट सफल दाम्पत्य जीवनको हार्दिक शुभकामना ।
फोटो– स्कोरनेपाल डट कम